Weerar ka dhacay gobolka Baay oo lagu dilay horjoogeyaal ka tirsanaa Al-shabaab - Halbeeg News
Weerar ka dhacay gobolka Baay oo lagu dilay horjoogeyaal ka tirsanaa Al-shabaab
MUQDISHO(HALBEEG)-Wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa saxiibbnada caalamka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Baay ayaa lagu dilay xubno ka mid tirsanaa ururka Al-shabaab.
Warsaxafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in howlgalka ciidamada ay qaadeen lagu dilay sagaal ka mid ahaa Al-shabaab oo iskugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad.
“Ciidamada Qaranka oo Gacan Ka helaya saaxiibo Caalami ah ayaa hawlgal qorshaysan Ka fuliyay Gobalka Baay, hawlkaan oo dhacay 30 November 2018-ka waxaa lagu beegsaday horjoogayaal iyo maleeshiyaad Ka tirsan Shabaab oo Ku hawlanaa Falal argagixiso, waxaaa lagu dilay hawlgalka Sagaal ka tirsan Shabaab oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad mana jirto waxyeelo soo gaartay shacabka”ayaa lagu yiri warsaxafadeedka.
Dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaysa saaxiibadeed waxay dadaal ugu jirta wiiqista Alshabaab, si looga hor istaago waxyeellada shacabka.
Howlgalkan ayaa daba socda howlgaladii ka dhacay gobolka Mudug ee lagu bartilmaameedsaday dagaalyahannada Al shabaab.
Ciidamada howlgallada Mareykan ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeymo ay ka fuliyeen gobolka Mudug ay ku dileen in ka badan 50 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in werarrada lala beegsaday goobo ururka ay duulaaleysanaayeen laguna burburiyey agab iyo saanad millatari.
Weerarrada is daba joogga ah ee uu Mareykanka ka fuliyo gudaha Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu xubno sar sare oo ka tirsanaa Al-shabab oouu ku jiro hoggaamiyihii hore Axmed Cabdi Godane.
Mid ka mid ah madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka oo geeriyooday
Mandheera oo marti gelineysa todobaadka dhaqanka Soomaalida